सञ्जय दत्तलाई तेस्रो होइन, चौथो स्टेजको फोक्सोको क्यान्सर भएको दाबी | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ३०, २०७७ chat_bubble_outline0
बलिउड फिल्म अभिनेता सञ्जय दत्त पछिल्लो केही दिनदेखि आफ्नो स्वास्थ्यका लागि चर्चामा छन् । ११ अगस्टमा ६१ वर्षीय अभिनेता फोक्सोको क्यान्सरसँग जुधिरहेको र यो तेस्रो स्टेजमा पुगेको खबर भाइरल भएको थियो । तर भारतीय मिडियाको ताजा रिपोर्टमा उनको क्यान्सर चौथो स्टेजमा पुगिसकेको दाबी गरिएको छ । यो दाबी लीलावती अस्पतालसँग जोडिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै गरिएको हो जहाँ सञ्जय दत्त शनिबार रातीदेखि भर्ना भएका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यम मुम्बई मिररले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेको छ, ‘सञ्जय दत्तको फोक्सोमा तरल पदार्थ जम्मा भएको थियो त्यसैले उनलाई सास फेर्न समस्या भइरहेको थियो । उक्त तरल पदार्थलाई परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । डाक्टरले यो टिबी वा क्यान्सर हुनसक्ने अनुमान पहिले नै गरिसकेका थिए । बुधबार उनको रिपोर्ट आएको छ र उनको फोक्सोको क्यान्सर चौथो स्टेजमा पुगिसकेको थाहा भयो ।’
रिपोर्टका अनुसार यसबारे सञ्जय दत्तको उपचार गरिरहेका डाक्टर तथा सिनियर पल्मोनोलोजिस्ट डा. जलिल पारकरसँग कुरा गरियो तब उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गरे ।
के भएको थियो ८ अगस्टमा ?
८ अगस्टमा सञ्जय दत्तलाई सास फेर्न समस्या भएको थियो र उनको अक्सिजनको लेभल पनि कम थियो । त्यसपछि उनलाई लिलावती अस्पताल पुर्याइयो । त्यहाँ उनको कोभिड–१९ परीक्षण गरियो जुन नेगेटिभ आएको थियो । यद्यपि, उनीहरु त्यसपछि पनि चिन्तित थिए । उनलाई दुई दिनसम्म अस्पतालको नन कोभिड वार्डको आइसीयूमा राखिएको थियो ।
फोक्सोबाट १.५ लिटर तरल पदार्थ निकालियो
टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार सञ्जय दत्त अस्पतालमा आफ्नी बहिनी प्रिया दत्त र एक साथीसँग पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो कि उनको दाहिने फोक्सोमा हावाको प्रवाह भइरहेको थिएन । त्यसपछि सिटि स्क्यान गरियो । यसबारे उनको फोक्सोमा तरल पदार्थ जममा भएको र दुई फोक्सोमा एउटा–एउटा घाउ पनि भएको पत्ता लाग्यो । सञ्जयलाई यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, क्षयरोग वा क्यान्सर पनि हुनसक्ने बताइयो । करिब १.५ लिटर तरल पदार्थ निकालियो ।
त्यसपछि सञ्जयलाई दिइयो क्यान्सरको जानकारीः
स्रोतका अनुसार जब सञ्जय दत्तलाई उनको तरल पदार्थलाई परीक्षणका लागि पठाइँदैछ भनेर जानकारी दिइयो तब उनले विभिन्न प्रश्न सोधे । त्यतिबेला उनलाई पिइटी स्क्यान गर्नुपर्ने बताइयो । सोमबार पिइटी स्क्यानमा हिस्टोप्याथोलोजी विभागले तरल पदार्थमा क्यान्सरको सेल पनि भेटे ।
त्यसपछि एउटा काउन्सिलिङ सेसन भयो र सञ्जय दत्तलाई उनको रोगबारे जानकारी दिइयो । त्यसपछि उनलाई एक अन्कोलोजिस्टसँग भेट गराइयो जहाँ उनले पूरा एक्सन प्लानबारे जानकारी दिए । डाक्टरले उनलाई इच्छा लागेको ठाउँमा उपचार गर्न सक्ने बताए । यसको एकमात्र उपचार किमोथेरेपी हो । उनको शल्यक्रिया गर्न मिल्दैन किनभने उनको क्यान्सर चौथो स्टेजमा पुगिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
पिबि सिन्धुले दीपिका पादुकोण र रणवीरसँग मनाइन् पदकको खुसी